Efa nalevin’ny kaominin’Ivato ny fatin’ilay vehivavy hita faty teny an-tsenan’Ivato, afakomaly maraina. Nisy olona nampilaza tao amin’ny zandary ao amin’ny poste fixe Ivato fa misy vehivavy iray maty ao an-tsena. Nidina teny an-toerana ny zandary niaraka tamin’ny dokotera nanao fizahana ny razana. Hamamoana no nitarika ny fahafatesany, tsy nisy taratasy mombamomba azy sady tsy manana fianakaviana koa izy.
Dahalo roa maty voatifitry ny zandary nandritra ny fifandonana tamin’ny zandary tao Mahasoa fokontany Maharivokely Mahabo, ny zoma maraina teo. Dahalo 30 lahy nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika indray nanafika tao an-toerana. Nanao fanarahan-dia ny fokonolona sy ny zandary ka izao nahafaty dahalo roa lahy izao. Olona telo naratra voatifitry ny dahalo. Basim-borona calibre 12 iray azo.
Maty tsy tra-drano ny mpamilin’ilay taksiborosy nitondra razana avy any Ambilobe ho any Ampanihy, ny asabotsy hariva teo tao Maevatanana. Tsy nitazona intsony ny frein-n’ilay fiara ka nifatratra tany amin’ny andrin-tany ilay fiara raha iny nihazo fidinana iny. Nisy olona dimy hafa naratra mafy ka nalefa notsaboina ao amin’ny CSB II Andriba. Mitohy ny famotorana.
Saron’ny zandary avy ao amin’ny borigadin’i Sambava, ny teratany vahiny iray ny zoma teo. Manana pasipaoro ara-dalàna izy ary afaka mijanona mandritra ny 90 andro eto Madagasikara nanomboka ny 11 novambra 2016 ka hatramin’ny 10 febroary 2017 ho avy izao. Tratra tamin’ny raharaha fifohana sy fitazonana rongony nandritra ny fisafoana nataon’ny zandary izy. Mitohy ny famotorana.